परिणाम देखिने गरी काम गर्नुस् – परराष्ट्रमन्त्री डा. महत « Pahilo News
परिणाम देखिने गरी काम गर्नुस् – परराष्ट्रमन्त्री डा. महत
प्रकाशित मिति : 26 August, 2016 2:12 pm
१० भदौ । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालय मातहतका सबै कर्मचारीलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि आज मन्त्रालयमा आयोजित पदस्थापन कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले उपलब्ध स्रोत साधनको बढीभन्दा बढी उपयोग गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यका बारेमा नियमित आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै मन्त्री डा. महतले नियुक्त भएर जाने सबै राजदूतलाई स्रोत साधनको अत्यधिक उपयोग गरेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रिक्त बाँकी मुलुकमा पनि छिट्टै राजदूत पठाइने जानकारी दिनुभयो ।
भारत र चीन दुवै नेपालका लागि महत्वपूर्ण छिमेकी मुलुक भएकाले सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सम्बन्ध थप उचाइमा पु¥याउन पहल गर्ने विश्वास दिए । उनले भने– “यो सम्बन्धलाई सुमधुर नगरी राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई संवद्र्धन गर्न सकिँदैन ।”
सत्तामा जो आए पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई संरक्षण गर्दै छिमेकीको चासो र चिन्तालाई पनि महत्वका साथ हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।रासस